Dawlada Italy Oo ka Hadasay Tahriibayaal Afduubay Markab kasoo Badbaadiyay Bada Mediterranean. – Heemaal News Network
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Talyaaniga Matteo Salvini ayaa ku eedeeyay qaar ka mid ah tahriibayaal u soo socday qaarada Yurub inay afduubteen markab ka soo badbaadiyay xeebaha Libya.
Tahriibayaasha ayaa la sheegay in ay u afduubteen markabkan si aan dib loogu celin dalka Libya waxaana afduubkan sameeyay labo kamid ah dadkii tahriibayaasha ahaa oo ka soo raacay doon yar xeebaha dalka Libya.
67 ruux oo ahaa tahriibayaal doonayay in ay magangelyo weydiistaan wadamada qaarada Yurub ayaa ugu dambeyn waxaa ay gaareen dalka Talyaaniga.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Talyaaniga Mr Salvini oo si weyn ugaga soo horjeeda dadka soo galootiga ah ee ka imanaya qaarada Afrika ayaa sheegay in labada ruux ee ka dambeysay afduubka in la xirey.
Hase yeeshee ma jiro warar faahfaahsan oo dheeraad balse waxaa ay wararka qaar sheegayaan in ciidamo Boolis ah oo hubeysan inay gudaha u galeen markabka.
Labada ruux ee ka dambeysay afduubka ayaa la sheegay inay ka soo jeedaan dalalka Sudan iyo Ghana. balse lama oga sida laga yeeli doono mustaqbalkooda.
Muhaajiirn Ku Dhimatay Labbo Doonyood Oo Ku Quusay Badda Cad Ee Dalka Liibiya
Hay’adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa sheegtay in muhaaajiriin ka badan 100 qof ay toddobaadkan dhinteen. Muhaajiriintani ayaa sida ay hay’adda sheegtay ku dhintay xeebaha dalka Liibiya. Dadkani muhaajiriinta ah oo intooda badan […]
Munaasabad ay xilalka kula kala wareegayeen Markab ciidan oo laga leeyahay dalka Spain oo si rasmi ah xilka howlgalka Atlaanta ee Soomaaliya kala wareegay Markab dagaal oo kuwa Talyaaniga ah ayaa lagu qabta xalay dalka […]